Taageerayaasha kooxda Real Madrid ee magaalada Jeddah oo fariin qiiro leh u diray Cristiano Ronaldo – Gool FM
Taageerayaasha kooxda Real Madrid ee magaalada Jeddah oo fariin qiiro leh u diray Cristiano Ronaldo
(Saudi Arabia) 09 Jan 2020. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ee magaalada Jeddah wadanka Saudi Arabia ayaa waxay fariin qiiro leh u direen xiddigoodii hore xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo, inta lagu gudi jiray kulankii xalay ay kooxda Valencia ku wada ciyaareen wareega afar dhamaadka koobka Spanish Super Cup.
Real Madrid ayaa iska xaadirisay finalka koobka Spanish Super Cup kaddib markii ay kaga adkaatay kooxda Valencia 1-3 ciyaar ka tirsaneyd wareega afar dhamaadka, waxayna Axada soo socota la ciyaari doonaan tii soo baxda Barcelona iyo Atlético Madrid.
Taageerayaasha kooxda Real Madrid magaalada Jeddah ee wadanka Saudi Arabia ayaa inta uu socday kulankii xalay Valencia, waxay kor u qaadeen boor ay ku soo qoreen fariin ku socota Cristiano Ronaldo taasoo u qorneyd sida soo socota:
“Cristiano Ronaldo, ma ilaawi doono 450-kii gool ee aad ku dhalisay 438 kulan, dib uma soo celin doontid”.
Si kastaba ha noqotee, Cristiano Ronaldo ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah halyeeyadii ugu fiicnaa ee kooxda Real Madrid, haddii uusan aheyn kooda ugu fiicanaa, kaddib mustaqbal qurux badan uu ku qaatay Los Blancos.
Cristiano Ronaldo ayaa u soo dhaliyay kooxdiisii hore ee Real Madrid 450 gool, wuxuuna kula guuleystay 16 koob oo ay ku jiraan 4 koob oo tartanka Champions League, 2 jeer horyaalka La Liga ee dalka Spain ah, si la mid ah Copa del Rey.
Muxuu ka yiri tababare Valverde mustaqbalka Arturo Vidal, kahor kulanka caawa ee Atlético Madrid?
Kooxda Chelsea oo go’aansatay in dalab qaali ah ay ka gudbiso xiddig ka ciyaara Premier League